Ụbọchị My Pet » 5 Dog enyi na enyi echiche maka A mbụ Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: Nov. 19 2020 | 2 min agụ
Ọ bụrụ na echiche nke a mbụ ụbọchị jupụtara ogologo, ihere kwụsịtụrụ ma mkparịta ụka na-akwụsị tupu ha amalite adịghị amasị gị, mgbe ahụ tụlee-eme atụmatụ a mbụ ụbọchị na-agụnye gị na gị ụbọchị si nkịta. Ewega nkịta nwere ike na-ihere silences na n'ọnụ mmiri na-enye gị ma onye n'ime gị anya mmadụ. Ma ebe kwesịrị ị na-aga? Legodị ihe ise nkịta-enyi na enyi ụbọchị echiche.
Eri nri na nkịta-enyi na enyi ụlọ oriri na ọṅụṅụ: N'achọghị nri abalị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ a mma-eyi echiche maka a mbụ ụbọchị. Ya mere, gịnị tinye a kwadoo ya site na-eri nri a nkịta-enyi na enyi ụlọ oriri na ọṅụṅụ? Iji chọta a nkịta-enyi na enyi ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ógbè gị, eji ọkacha mmasị gị search engine ma ọ bụ jụọ ọkacha mmasị gị nkịta boutique echere Atụmatụ.
Aga ihe n'èzí egwu: Ma ọ bụ na-ete egwú ka a cover gbalaga-egwu wɔfrɛ wɔn T nke na-ewu ewu na ìgwè ndị agha ma ọ bụ na-ege ntị a ụlọ egwú egwu oge gboo music, ịga ihe n'èzí egwu na mbụ na ụbọchị bụ oké ụzọ na-agụnye gị nkịta. Ọ bụrụ na ọ kwe omume, mee a picnic nkata ma na-agụnye ụfọdụ nkịta-enyi na enyi emeso, kwa. Dị nnọọ jide n'aka na egwu nkiri mgbakọ na-enye ohere nkịta; ị na-achọghị na-abata gị pooches nanị chọpụta na ha nwere ike ghara ịga.
Ịnyocha obodo gị na ụkwụ: Ọ bụrụ na ndị ihu igwe dị mma, mgbe ahụ tụlee nzute na gị nkịta na a ma ama dị ịrịba ama na ịgagharị ebe. Ije ije na-a nọrọ jụụ ụzọ ga-esi mara onye ọ bụla ọzọ na-na-na-enye gị nkịta ha mmega. Unu echefukwala poop akpa!
Imeri na a nkịta ogige: N'ihi na a nkịtị na ngwa mbụ ụbọchị, na-atụ aro nzukọ gị nkịta na mpaghara nkịta ogige. Gị na nkịta nwere ike inwe mmega na-egwu egwu a egwuregwu na nke catch. Ịnagide na nkịta ogige-eme ka ụbọchị nọrọ jụụ, kwa; ma ọ bụrụ na ị kụrụ ya anya, ị nwere ike aro n'isi maka nri abalị, ma ọ bụrụ na sparks adịghị kpọmkwem ofufe, i nwere ike dị isi n'ụlọ. Nọgidenụ na-bottled mmiri na aka maka gị na nkịta, na ma eleghị anya ụfọdụ emeso gị nkịta. Tupu ị jidere na leash, ezie, elele mbụ ahụ ma ọ bụrụ na nkịta ogige achọ a pụrụ iche ma ọ bụ ikike mkpado, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwụ ụgwọ a ego tupu.
Aga a nkịta ọgwụ: Ma ọ bụ a na klas ndị Atụmatụ na ejiji ma ọ bụ a na-agbatị na klas gị na nkịta, ịga a nkịta-okowụk ọgwụ gị na ụbọchị na-akwa ụzọ ga-esi mara onye ọ bụla ọzọ na a nọrọ jụụ ma ala ọnọdụ. Iji chọta a nkịta ọgwụ nọ n'ógbè gị, i nwere ike ịmalite site ịlele gị obodo anụmanụ ndo ma ọ bụ ọpụrụiche nkịta ụlọ ahịa.
Mgbe atụmatụ a mbụ ụbọchị na pụrụ iche mmadụ na ha nkịta, jide n'aka na ha ahụ na-eru na-eweta ha canine tinyere. Ụfọdụ nkịta ghara ịdị mma na ìgwè mmadụ ma ọ bụ ndị ọzọ na nkịta.